SAWIRRO: Shirkadda Golis iyo Radio Daljir oo soo Gaba-gabeeyay Barnaamij Aqooneedkii Tarta iyo Tacliin – Radio Daljir
SAWIRRO: Shirkadda Golis iyo Radio Daljir oo soo Gaba-gabeeyay Barnaamij Aqooneedkii Tarta iyo Tacliin
Luulyo 27, 2015 5:05 b 0
Isniin, Luuliyo 27, 2015 (Daljir) —Xaflad lagu soo gunaanadayay barnaamijka Tartan iyo Tacliin ee kasoconayay bishii barakaysnayd ee Ramadaan idaacadda Daljir islamarkaana ay maalgalinaysay shirkadda isgaarsiinta Golis ayaa lagu qabtay jaamacadda Bariga Africa xarunteeda caasimadda Garowe.
Tartankan oo loo qabto sanad walba bisha Ramadaan dugsiyada sare ee Puntland laguna tartansiiyo cilmiga qaybihiisa kala duwan ayaa waxaa sanadka isugu soo haray wareegga kama dambaysta labada dugsi ee Alnawaawi oo ku yaala caasimadda Puntland ee Garowe iyo dugsiga Mumtad\_’a ee dagmada Buurtinle kuwaas oo si toos ah xalay loogu tartansiiyay hoolka ay munaasabaddu ka dhacaysay.
Baratankii aqoonta ee xalay dhex maray labada dugsi ayaa waxaa ugu dambayn guushu dhiniciisa noqotay dugsiga sare ee Mumtad\_’a ee dagmada Buurtinle kaas oo noqday sanadka hogaanka dugsiyada sare ee Puntland.
Shacab iyo dabaal dag loo muujiyay dugsiga koobka qaaday kadib waxaa la gudagalay barnaamij ay shirkadda Golis ugu talagashay inay la wadaagto martisharaftii soo xaadirtay munaasabadda kaas oo ahaa bakhtiyaanasiib qofka lagu waydiinayo su\_’aalo la xiriira adeegyada shirkadda Golis islamarkaana uu ku guulaysanayo abaalmarino ay kamid yihiin Mobilo, dhar noocyo kala duwan isugu jira, qalabka lagu kaydsado xogaha electronica ah iyo hadiyado kale oo qaali ah.
Agaasimaha Guud ee Idaacadda Daljir Axmed Sheekh Maxamed TallMan oo goobta isna ka hadlay ayaa sheegay in Idaacadda Daljir ay si cadaalad ah u tartan siisay ardaydii ka qayb-galaysay tartankan ,waxaana uu sheegay in Idaacadda Daljir ay u taagan-tahay u adeegidda danaha bulshada soomaaliyeed gaar ahaan ree Puntland.
(Dhagayso) M/kuxiggeenka Galmudug Xaashi oo sheegay in Galmudug ay xaduuda muumulkeeda ka dhigtay Koonfurta Gaalkacyo.
Barnaamijka Maanhadal ee Radio Daljir oo looga hadlayo Hiigsiga 2016 Iyo Khilaafka siyaasadeed ee u dhaxeeya DF Iyo Maamullada dalka.